Macedonia kwụsịrị esemokwu kemgbe afọ iri na Gris, gbanwere aha
Home » Njem njem » Macedonia kwụsịrị esemokwu kemgbe afọ iri na Gris, gbanwere aha
Macedonia ekwenyela igbanwe aha ya na Northern Macedonia iji kwụsị esemokwu afọ iri na Gris, nke n'etiti ihe ndị ọzọ gbochiri mba mbụ Yugoslav ịbanye EU na NATO.
"A ga-akpọ Masedonia Republic of Northern Macedonia [Severna Makedonija]," Zoran Zaev, onye isi ala nke mba ahụ, kwupụtara na Tuesday. A ga-eji aha ọhụrụ ahụ mee ihe nke ụlọ na nke mba ụwa, yana Macedonia na-eme mgbanwe dị mkpa na Iwu ya, Zaev kwukwara.
Nkwupụta a bịara mgbe mkparịta ụka ekwentị na onye Greek, Alexis Tsipras, na Tuesday. Tsipras kwuru na Atens nwetara "ezigbo nkwekọrịta nke kpuchitere ihe niile a chọrọ n'aka ndị Greek" ka ọ gwara Onye isi ala Greek, Prokopis Pavlopoulos, banyere nsonaazụ mkparịta ụka ahụ.
Esemokwu dị n'etiti Atens na Skopje na-aga n'ihu kemgbe 1991, mgbe Macedonia kewapụrụ na Yugoslavia ma kwupụta nnwere onwe ya. Gris rụrụ ụka na site n'ịkpọ onwe ya Republic of Macedonia mba ndị agbata obi ya na-ekwupụta ókèala nke mpaghara ugwu Greek, nke a na-akpọkwa Masedonia.
N'ihi esemokwu aha ahụ, Gris kwadoro veto niile Skopje na-esonye na European Union na NATO. Anabatara mba ahụ na UN na 1993 dị ka mbụ Yugoslav Republic of Macedonia (FYROM).
A ga-etinye aha ọhụrụ Masedonia maka referendum, nke a ga-eme n'oge mgbụsị akwụkwọ. Ọ bụkwa ụlọ omebe iwu Macedonia na nke Greek ga-akwado ya.
Agbanyeghị, ịgafe aha "Northern Macedonia" site na nzuko omeiwu Gris nwere ike bụrụ aghụghọ dị ka ọtụtụ ndị otu na mbụ jụrụ ụdị mmejọ ọ bụla na okwu a.
"Anyị ekwenyeghị na anyị agaghị atụ vootu maka azụmahịa ọ bụla gụnyere aha 'Macedonia,'" Panos Kammenos, Mịnịsta na-ahụ maka nchekwa Greek na onye isi nke pati Independent Greek Greek kwuru.
Ndị omeiwu a na-akwado echiche ndị mmadụ na-ewu ewu ka narị puku narị ndị Gris mere ngagharị na February na mkpesa megide ojiji ụwa "Macedonia" site na mba ndị agbata obi. E nwekwara nnọkọ na Masedonia n'oge opupu ihe ubi, na-achọ ka aha obodo ahụ dịrị.
Na nkenke: Ndị njem China n'oge ahụ na ugbu a